မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: August 2010
တပ်မတော် ဟုခေါ်ဆိုနေကြပါသည့် လက်နက်ကိုင်များ၏ အဆင့်အတန်း
မြန်မာ့ သမိုင်းများနှင့် စာအုပ်များတွင်လည်း
အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို ရေးသားထားပါသည် ။
မြန်မာဆိုရှယ်လစ် တပ်မတော် ။
စသည်ဖြင့် မြန်မာပြည်မှ တပ်မတော်သည်
ခေတ်အဆက်ဆက် စနစ်အမျိုးမျိုး ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါသည် ။
တပ်မတော်စတင်ဖွဲ့ စည်းသည့် ကာလမှ စတင်ပြီး
တပ်မတော်အောက်ခြေ အကြပ် တပ်သား အရာခံများ၏ ဘဝသည်
၂၀၁၀ ရောက်လာသည်အထိ ထမင်းတနပ်ကို အဟာရပြည့်စုံစွာ မစားခဲ့ရသေးပါ ။
ချော့မော့ပြီး သာတူညီမျှ စနစ်ကြီးကို တည်ဆောက်ရင်း
အောက်ခြေတပ်သားတွေက ကုလားပဲဟင်းကို အသားဓါတ်ပါတယ်ဆိုပြီး
ဝက်ကျွေးတဲ့ ငပိကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စားခဲ့ကြတယ် ။
အောက်ခြေကိုနားလည်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက ဦးဆောင်ပြီး
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ရှိနေပြီ ။
အိမ်မက်တွေထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ တပ်သားတိုင်းမှာ
ကာကွယ်ရေး စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ရင်း
မိမိတို့ ရဲ့ မိသားစုချမ်းသာရေးမူကို ဇောင်းပေးလို့ 
အာဏာရ ဗိုလ်လုပ်သူတွေ ချမ်းသာကြပါသည် ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်ဗိုလ်တွေ အာဏာဆက်ကိုင်မယ် ဆိုတော့
အရင်းရှင်ဟု မြန်မာတွေခေါ်တဲ့ 
အမေရိကန်က တပ်မတော်သားတွေနဲ့ 
အနိမ့်ဆုံးလခဟာ ယူရို ၁၇၀၀ (မြန်မာငွေ ၂၅ သိန်းဝန်းကျင်) ကစပါတယ် ။
သယံဇာတ ပြောများတဲ့ မြန်မာပြည်က တပ်မတော်သားတွေကကော
ဒီမိုကရေစီ လို့ အများစုဆန္ဒအရ အုပ်ချုပ်ကြတဲ့ အစိုးရတိုင်းဟာ
တိုင်းသူပြည်သားများနဲ့တပ်မတော်သားများကို
ညီအကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးများ သဖွယ်
သဘောထား စောက်ရှောက် ကာကွယ် ဆက်ဆံကြပ်တယ် ။
မြန်မာပြည်က အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေကို စစ်ဗိုလ်တွေက
ဥာဏ်မရှိသူ အဆင့်မရှိသူ ထားရာနေ ကျွေးတာစား
ပေးတာဝတ် အမိန့် ပေးရင် သေဖို့ကလေကချေများ အဆင့်သာ ထားပါတယ် ။
Posted by Mr Htay Tint at 12:39 AM0comments
စစ်ရေးချူပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရမြင့်အောင်က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး
ကစထမှူးတဦးဖြစ်သော ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုမှာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဖြစ်လာသည်။
နံပါတ် ၃ အဆင့်ဖြစ်သော ကြည်းရေလေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏နေရာတွင်
ယခင် စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဖြစ်လာသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး၏ ရာထူးဖြစ်သော စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးသို့
ယခင် နေပြည်တော်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင် ရာထူးတိုးမြှင့် ရောက်ရှိလာသည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့်ရှိသူအများစု ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားပြီး
တိုင်းမှူးအများစု အပါအဝင် ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် ရှိသူများ ရာထူးတက်သည်။
လက်ရှိရာထူး - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ယခင်ရာထူး
ကြည်းရေလေညှိနှိုင်းရေးမှူး - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ကစထမှူး(၂) ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်
စစ်ရေးချုပ် - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ခင်ဇော်ဦး
စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - နေပြည်တော်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင်
စစ်ရာထူးခန့်ချုပ်- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြင့်
ရန်ကုန်တိုင်း- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -တပ်မ ၇၇ တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းသန်း
တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ဌာနချုပ်ရုံး- - - - - - - - - - - - - -အနောက်တောင်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆွေ
ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး အရာရှိချုပ်- - - - - - - - - - -ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး (၁)- - - - - -အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုး
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး- - - - - - - - အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သန်းထွဋ်
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး (၃) - - - - - တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် လှမင်း
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး (၄) - - - - - အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်နိုင်ဝင်း
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး (၅) - - - - - အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ
တပ်မှူး တပ်သား ပြောစကား (၀၂၃)
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် ပြောပြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရမြင့်အောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့တတွေ ပင်စင်စား လား၊ အရံအင်အား လား
Posted by Mr Htay Tint at 4:53 AM3comments
Posted by Mr Htay Tint at 11:14 AM0comments
၂၀၁၀ နိူဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ့သည်
ရင်ထဲ အသဲထဲက မုန်းနေသော
ပုဆိုးဝတ် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး လက်လက်သို့ 
တရားဝင်ကြ ရောက်မည့် နေ့ ဖြစ်သည် ။
အနက်ရောင် အနီရောင် များအသုံးပြုကြပြီး
အဖြူရောင် အဝါရောင် သင်္ကန်းရောင်(ရှားစေး) ရောင်များကိုသာ သုံးကြပါ ။
အောက်ပါ ပြက္ခဒိန်သည် စစ်အာဏာရှင်က
ပြည်သူပြည်သားများကို အနံ့ ပေး အငွေ့ ပေး ရှုစေသော
လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုတာ ဒီလို တမျိုးတည်းမဟုတ်ပါ ။
လွတ်လပ်စွာ ကပြခွင့်နဲ့ အတူ ပြောဆိုခွင့်လည်း ရှိရပါမယ် ။
လူကုန်ကူးမှုဟာ မြန်မာပြည်သားတွေမှာ အများဆုံးလို့အရှေ့ တောင်အာရှဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ကဆိုပါတယ် ။
စစ်တပ်က လမ်းလွဲပေးလိုက်တဲ့ ပျော်ရွင်မှုတွေရဲ့ နောက်ဆုံးလမ်းကတော့
မျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့ ဒေသထဲကနေ ဘဝကို ဖြစ်ချင်ရာ ဖါဖြစ်ဆိုတဲ့ ဘဝလေး တွေပါ
Posted by Mr Htay Tint at 1:27 AM0comments
Posted by Mr Htay Tint at 10:33 PM0comments
Posted by Mr Htay Tint at 11:36 PM0comments
၁၄ သြဂုတ်လ ၂၀၁၀
ဖင်လန်ဆေးရုံမှ အကြောင်းကြားပါသည် ။
ကိုရဲမင်း အဆုတ်သည် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည် ။ ပိုးအမျိုးအစားကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါသည် ။
အသဲနှင့် ဦးနှောက် ရပ်ဆိုင်းမှုအတွက် နမူနာတစ်ရှုးစများ ထုတ်ယူပြီး ခောတ်မှီသော ဥရောပ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ ထားပါသည် ။
ဖင်လန်နိုင်ငံသားခံယူထားသော ကိုရဲမင်း၏ အရိုးပြာများကို မြစ်တွင်းမျှောရန်နှင့် နေရာဝယ်ပြီး မြှုတ်နှံရန် မေးလာပါသည် ။
ကျန်ရစ်သော သားပိုတေး အမြဲတန်း ဖခင်ကို အမှတ်တရဖြစ်စေရန် မြေဝယ်ပြီး အုပ်ဂူလုပ်ရန် အကြံပြုလိုက်ပါသည် ။
လူတယောက်စာမြေကွက် အတွက် ဖင်လန်နိုင်ငံ ဟန်းစကီးမြို့ ပေါက်ဈေးမှာ တနှစ်လျှင် ၁၀ ယူရိုဖြစ်ပါသည် ။
ကိုရဲမင်းကို အခိုးအငွေ့ အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး သွေးမုန်တိုင်းနဲ့ အတူ စစ်အာဏာကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်စေဖို့မီးသဂြိုလ်စက်
ဘဝရပ်တည်ရေး အလုပ်တွေများခဲ့လို့ 
နောက်ဆုံးကြမှ မှာစရာတွေ ပြောစရာတွေ အပြည့်နဲ့ ပေါ့
သေသေသပ်သပ်နေတပ်တဲ့ ရဲမင်းကို ရဲဘော်ရဲဖက်များက
နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြင်ပေးကြတယ် ။
ကိုရဲမင်းရုပ်အလောင်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ဂါဝရပြုခြင်း
ကိုသန့် စင်ထွန်းက တိုက်ပွဲဝင် ကိုရဲမင်းအကြောင်းရှင်းပြပါတယ် ။
ကိုရဲမင်းတယောက် ရောက်ရာ ဘုံဘဝကနေ လူနတ်သာဓုခေါ်စေနိုင်တဲ့
အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အမျှအတမ်းဝေကြတယ် ။
ကိုရဲမင်းကို တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြခဲ့ကြတယ်
ကိုရဲမင်း ဇနီးသည်နှင့်သားက စစ်အဏာရှင်ကို တော်လှန်နေသူများနဲ့ အတူ
ကိုရဲမင်း ရုပ်အလောင်းအတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် ပြင်ဆင်နေကြပုံ
ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်မြောင်ရေးအစည်းအဝေး မှာလည်း တက်ကြွခဲ့တယ်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာရှာစဉ်က ( ကိုရဲမင်း ကိုခင်ကျော် )
(၁၂ မေလ ၂၀၀၇)
Life of Ye Min , ( english vision is page 4,5,6 )
ကိုရဲမင်းကို ၁၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉၆၄တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၈ တွင်၇န်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ ဒုတိယနှစ်တွင်ပညာသင်ကြားနေပါသည်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပေါ်ပေါက်ရေးတို့ တွင်အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည် ။
ပြည်လုံးကျွတ် ဒီမိုကရေစီတာင်းဆိုပွဲများတွင် လှိုင်မြို့ နယ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂတွင်ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့ တပ်မတော်မှ
အာဏာသိမ်းပြီး လှိုင်မြို့နယ်သို့ ပစ်ခတ်ပြီး ဝင်လာသည့်အခါ
အသေခံကျောင်းသားအဖွဲ့ ဝင်ကာ လှိုင်မြို့ နယ်ထဲ
သွေးမကျရေးတွက် စစ်တပ်ပစ်ခတ်မှုကို အသက်ပေးမယ်ဆိုကာ
သမိုင်းချည်စက်ဝင်းအပြင်ကားလမ်းကြီးမှာ လက်ချင်းချိတ် ကာကွယ်ခဲ့ပါသည်။
(မှတ်မိသမျှ ဌေးတင့် ဌေးနိုင် ငြိမ်းချမ်း ရောင်နီ ဝင်းဦး ရဲမင်း သားသား အေးသိန်းထွေး သက်ကြည်
အဲဒီနေ့ ၁၈သြဂုတ်လ ၁၉၈၈ မှာ စစ်တပ်ကတာဝန်ယူယူခဲ့သူက
၁၉၇၄ကျောင်းသားဟောင်း ဗိုလ်မှုးမြင့်သိန်းက ပစ်မိန့် မပေးလို့သေဘေးကလွတ်ခဲ့တယ်
၁၉ သြဂုတ်လ ၁၉၈၈ နေ့ တွင် တပ်မ ၂၂ လက်အောက်ခံတပ်များ ဝင်လာပြီး
သမိုင်းလမ်းဆုံမှ လှည်းတန်းမီးပွိုင့် အထိ ပစ်ခတ်ပြီး
လမ်းမတလျှောက် ချီတက်သွားရာ လမ်းမတလျှောက်
အလောင်းတွေ သွေးတွေနဲ့ပုံ ထပ်နေပါသည် )
၁၉၈၈ ကျောင်းသားများ ရပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲများကို အနှစ် ၂၀ ကျော်
စစ်တပ်အာဏာရှင်များကို လက်မမြောက် ဒူးမထောက် အရှုံးမပေးဘဲ
နယ်စပ်ဒေသ ဘန်ကောက်ဒေသ မနီလွိုင်စခန်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဖင်လန်နိုင်ငံ အထိ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းပြီး
နောက်ဆုံး ဆေးရုံပေါ်တွင် နေရသည့် အချိန်အထိ
အသက်ရှင်ရန် ကူညီနေသည့် စက်ကရိယာများ
အကူ ဆေးဝါးများကိုလည်း ငြင်းဆန်ကာ
၂၈ ဇွန်လိုင် ၂၀၁၀ နံနက် ၅ နာရီအထိ
He was die in Helsinki in Finland on5o’clock 28 July 2010/
He told them who working in hospital why he left from Burma and what he want to see Burma.
၃၀ ဇွန်လိုင် ၂၀၁၀
ကိုရဲမင်း၏ ရရက်မြောက် ရက်လည်ဆွမ်းကို ဖင်လန်နိူင်ငံ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကပ်စဉ်က
Where are you go after you death with out friend?
၃ သြဂုတ် ၂၀၁၀
What is the effective you don't want to joint other people??
Donate for Ye Min and Order to Ye Min finish Duty form Free Burma
( အနှစ် ၂၀ ကျော် ကာလအတွင်း ၁၉၈၈ ကျောင်းသားအမည်ခံပြီး လမ်းလွဲနေသူများ ဖေါက်ပြန်နေသူများကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပြီး ရင်နာလို့၁၉၈၈ ကျောင်းသားခံယူချက်နဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ကိုရဲမင်းကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အားလပ်သည့် အချိန်များတွင် တဆင့်ခြင်းရေးပါမည် ။
၁၉၈၈ သြဂုတ်လ မတိုင်မှီ လှိုင်မြို့ နယ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ကို ၁၂ ရပ်ကွက် သမဝါယမဆေးခန်း အတွင်းရှိ လူနာစောင့်သည့အခန်းတွင် ဖွဲ့ စည်းကြပါသည် ။ မှတ်မှတ်ရရ အများဆုံးဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူက သားသား ခေါ် မျိုးဇော် ပါ ။
ကျောင်းသားများ ပြောက်ကြားချီတက် ဆန္ဒပြရန် ခွပ်ဒေါင်းအလံ လိုအပ်လာပါသည် ။
မှောင်ရိပ်ထဲက လက်ကနဲ အလင်းနဲ့ အတူ ကျွန်တော် ခွပ်ဒေါင်းအလံ တာဝန်ယူတယ်ဟု အသံထွက်လာပါသည် ။
အဲဒီတုံးက ကျွန်တော်တို့ ခွပ်ဒေါင်းပုံ ကိုအားလုံးမမြင်ဘူးသေးပါ ။ ကဒေါင်းပုံက ဗလာစာအုပ်တချို့ မှာ ပုံနှိပ်စဉ်က ပါလို့ မြင်ဖူးပါသည် ။
ကျောင်းသားငယ်တွေ ပွစိ ပွစိ ဖြစ်သွားပါသည် ။
သူ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အသိဥာဏ်က သူများရှေ့ မှာပါ ။
ကျွန်တော် ရကသ နဲ့ မကသ ကစည်းရုံးရေးကျောင်းသားတဦးပါ ။
ကျွန်တော့် အဖေက ပုံဆွဲ ပန်းချီဆရာပါဟု တဆက်တည်း အားတက်သရောရှင်းပြပါသည် ။
မှောင်ရိပ်ထဲက အသားညိုညို ပါဝါမျက်မှန် တဝင်းဝင်းနဲ့ကျောင်းသားတယောက် ထွက်လာပါသည် ။
ကျွန်တော့ နာမည်အရင်းက ရဲမင်း ပါ ။
အော် သူ့ နာမည် ရဲမင်း
နောက်ထဲမှာနေပြီး လိုအပ်လျှင် တာဝန်ယူလိုသည့် စိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ့၁၉၈၈ကျောင်းသား ။
အသံက မာမာ မျက်နှာပေးက တင်းတင်း ယုံကြည်ချက်ကို
တည့်တည့်ပြော တည့်တည့်ရှောက်မည့် ပြတ်သားသည့် ၁၉၈၈ ကျောင်းသား
ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒတွေပြကြသောအခါ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး တာဝန်ယူခဲ့သည် ။
လုပ်သား ပြည်သူများကို အဆိပ်ဘဲဥ အဆိပ်များလုပ်ကြံသူများကို
လူထုကဖမ်းပြီး ဒေါသတကြီးနဲ့ထုကြရိုက်ကြသောအခါ
ဒုတ်ဒါးများကြားမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ဖြေရှင်းခဲ့သည့် သတ္တိခဲ ကျောင်းသားတဦး ။
အချင်းချင်း စကားများခဲ့လျှင် ဘေးမှာထွက်နေပြီး လွတ်အောင်နေတတ်သူတဦး ။
သူ့ ကိုရန်လုပ်လျှင် တော်လှန်ရေးသမား ဘက်တူသူတွေမို့တုံ့ ပြန်ရန်ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားသူ တဦး ။
၁၉၉၀ မေလ လောက်မှာ ထင်တယ် ။ ဘန်ကောက်ရောက်ခါစပေါ့ တက္ကသိုလ်ဆရာတဦး အမျိုးမင်္ဂလာဆောင်
ချမ်းအေး..............အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်ပေါက်စ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအပြီးဘန်ကောက်ကိုရောက်နေပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီစက်ရုံမှာ ယာယီလုပ်ပြီး အမေရိကန်ကို ကျွန်တော်တို့ မသိခင်မှာ ထွက်ခွာခဲ့သူ ။ ယ္ခု ဗီအိုအေမှာ လုပ်နေတယ်လို့ သိရတယ် ။ဘန်ကောက် လပ်စီမှာ အခန်းငှားနေစဉ်က ကူညီခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ မမ်အဖေကြီးပြဿနာကြောင့် ပြောင်းသွားတာလို့ ရဲမင်းကမှာဘူးတယ် ။
ထွန်းထွန်းဦး..........သူငယ်ချင်းများငတ်နေတာကို ကြက်ခိုးပြီးရှာကျွေးလို့ကြက်သခိုးလို့ စပြီးခေါ်ကြတယ် ။ ကနေဒါမှာပေါ့
ရဲမင်းနဲ့ဖုန်းပြောရင် လက်ဖါးအိုမှာနေစဉ်က မကြာခဏကူညီခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းဦးတို့ စုံတွဲကို ကျေးဇူးတင်နေတုံးဘဲ
ဌေးတင့် ..............ယ္ခုတော့ နယ်သာလန်မှာ အခြေချလိုက်ပြီပေါ့
ရဲမင်း ..................နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ တိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သူ
ရိုးသားစွာရှာဖွေစားသောက်ပြီး တော်လှန်နေသူ တောထဲက သူငယ်ချင်းများကို ငွေပို့ ရန် စက်ချုပ်ကြသည် ။
ငှက်ဖျားစားထားတဲ့ရုပ်ဆိုတာ အဲဒီပုံပေါ့ ၁၉၉၁ မတ်လကုန်လောက်ကထင်ပါတယ် ။ ရဲမင်းသေတဲ့အထိသိမ်းထားပေးတာလေ။
ဘန်ကောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက မြန်မာပြည်ကရိုတီရောင်းသတင်းပေးတွေအကူအညီနဲ့ လိုက်ဖမ်းလို့ လေယာဉ်ကွင်းနောက်က
ချောင်းဘေးမှာ ပုန်နေရင်း ဘဝကို ရဲမင်းနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်စဉ်က
(၁၉၉၂ နှစ်ဦးပိုင်းက ကြက်ရိုးကင် ၂ ချောင်းကို တဝက်စီစားပြီး ခွဲတန်း ငံပြာရည် ၁ ဇွန်းနဲ့ထမင်းတပုဂံစီ စားခဲ့စဉ်ကပေါ့ဗျာ )